Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda & Waxyaabihii Ay Wargeysyada Ugu Waaweyn Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Axad Ah. - Gool24.Net
Waxaanu halkan idiinku soo bandhigi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga iyo wixii ay wargeysyada Yurub ka qoreen dhaq-dhaqaaqa suuqa saaka oo Axad ah.
Barcelona iyo Paris Sainr-Germian ayaa filanaya inay gudaha toddobaadkan iska soo dhammeeyaan heshiiska ku daba dheeraaday ee Neymar JR iyadoo Neymar uu maalmaha soo socda xiddig Barca ah noqon karo. (Sport)
PSG ayaa haatanba ka fikiraysa xiddigii u bedeli lahaa Neymar waxaana ay isha ku haysaa Paulo Dybala kaas oo ay macquul tahay inuu kasoo hayaamo Juventus kaddib hoos u dhac ku yimid tan iyo imaatinkii Cristiano Ronaldo.
Manchester United, Everton iyo Paris St-Germain ayaa dhammaantood la xidhiidhay Juventus iyaga oo ka doonaya saxeexa khadka dhexe ee Blaise Matuidi. (Le Parisen)
David De Gea ayaa lagu soo warramayaa inuu ugu dambayn heshiis la meel dhigay maamulka kooxdiisa Man United, Heshiiskaas ayaa ah mid lix sano ah oo uu ku noqon doono goolhayaha ugu mushaharka badan dunida. (Sunday Telegraph)
Manchester City ayaa u muuqata mid ku guuleysatay saxeexa khadka dhexe ee ree Argentina ee Thiago Almada oo haatan u ciyaara Velez Sarsfield, City ayaa la sheegayaa inay doonayso inay dalab 16 Milyan ah ka gudbiso 18 jirkan (Sun on Sunday)
Liverpool ayaa doonaysa daafaca bidix ee kooxda Augsburg ee Philipp Max si uu tartan ula galo Andrew Robertson. (Sport)
Manchester United ayaa wada hadalo horumar leh kula jirta garabka kooxda Lille Nicolas Pepe oo 70 Milyan lagu qiimeeyo, Pepe ayaa horeba xiiso uga helay kooxaha Liverpool, Arsenal iyo Everton. (Sunday Times)
Roma ayaa isha ku haysa saxeexa garabka kooxda AC Milan ee Suso balse Milan ayaan ku fasixi doonin wax ka hooseeya €40m Milyan. (Gianlucadimarzio)
Atletico Madrid ayaa loo bandhigay saxeexa Christian Eriksen iyaga oo Tottenham kagala saxeexan kara kacag €70m Milyan ah. (Bein Sports)